Apple | My Burmese Blog
Posts in Category: Apple	Using iPhone as Guitar FX Processor
On November 16, 2012	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Guitar, iPhone	လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ရက်က အိမ်မှာ Metal သီချင်းတစ်ပုဒ် ကြိုက်လို့လေ့ကျင့်မလို့ဟာ BEADF#B ဆိုတဲ့ tuning ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ညှိမရတာနဲ့ ကိုစိုးဝေကြီး ကိုမေးစမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ guitar tuner ဝယ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ကိုစိုးဝေ ကဝယ်ရင် tuner ကို 40, 50 လောက်ပေးဝယ်မယ့် အစား iPhone နဲ့ ဂစ်တာနဲ့ ချိတ်တဲ့ plug ခေါင်းဝယ်ပါ့လားဆိုလို့ အွန်လိုင်းမှာ review တွေဖတ်စျေးတွေကြည့်ရင်းနဲ့ iDevice နဲ့တွဲတဲ့ ဂစ်တာ plug ကို အလုပ်ကပိုက်ဆံရလာတုန်းလေး ဝယ်မယ်ဆိုပြီး မြို့ထဲမှာ အရှာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ App, iOS	Continue Reading
Review on iPad Camera Connection Kit
On January 23, 2012	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- iPad	ဒီနေ့ည ဘာစာရေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရင်းနဲ့ iPad အတွက် apple က ထုတ်ထားတဲ့ iPad camera connection kit အကြောင်း ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက iPad 1 ထွက်ကတည်းက သူတို့ရောင်းခဲ့တာပါ။ ဒေါ်လာ ၃၀ လောက်ပေးရမယ် အထဲမှာ ခေါင်းလေး ၂ ခုပါပါတယ် တစ်ခုက SD Card reader, နောက်တစ်ခုက USB port အဲဒီ၂ ခုက iPad ရဲ့ 30 pin connector မှာသွားဆက်ရတာပါ။
iPad	Continue Reading
On October 6, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Apple	ဒီနေ့ အောက်တိုဘာ ၆ ရက် ဟာ တကယ်တော့ မနက်မိုးလင်းကတည်းက ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတဲ့ နေ့ပါပဲ… မိုးလင်းကတည်းက Steve Jobs ဆုံးပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ တက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ နာမည်ကြီး သတင်းဌာနတွေ ဆိုတော့ သေချာသွားပြီပေါ့. နောက် Apple.com မှာလဲ ပုံတင်ထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ တကယ်ပဲ Steve jobs ဆုံးသွားရှာပါပြီ.. အရင်လို ကောလဟလ မဟုတ်တော့ပါဘူး.. အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ဆုံးသွားရှာပါပြီ…
Apple, Steve Jobs	Continue Reading
On August 8, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- iPhone, tips and tricks	ဒီနေ့တော့ iPhone tips & tricks တွေ အကြောင်း ရေးပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ april fool နောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး တကယ်ပါ။ download လုပ် လုပ်စရာမလိုပါဘူး များသောအားဖြင့်တော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး အရင်က ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်အတွက် ရေးထားတာလေး ပြန်တင်ထားတာပါ။ iOS, iPhone	Continue Reading
Lion ~ First Well Known OS Comes with Myanmar Unicode
On June 12, 2011	by Htoo Tay Zar	With	17 Comments	- Apple, Mac	နောက်လ July ထဲဆိုရင် Mac OS အသစ် Lion ထွက်ပါတော့မယ်။ ဒီ lion ဟာ features အသစ် 250 ကျော်နဲ့ ထူးခြားချက်တွေရှိသလို အထူးခြားဆုံးကတော့ မြန်မာဖောင့် ကို မူလ OS ထဲမှာ သွင်းပေးထားတာပါပဲ။ Unicode font ဖြစ်ပါတယ်။ ကွျန်တော်ကော အခြား နည်းပညာ အကြောင်းရေးနေသူတွေကာ အားလုံး အရင်ကတည်းက လူမုန်းခံပြီး ပြောခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းလေးပါ… PC OS Vendors တွေဟာ တစ်ချိန်ကြရင် Unicode based fonts ကို သာ support လုပ်မယ်ဆိုတာ အခုတော့ အိမ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာပါပြီ။
Apple, Burma, Mac, Myanmar, tech news	Continue Reading
Pet Pal ~ iPhone App Let You Control Your Pets
On April 1, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- App, iPhone	Gameloft ဆို​ု​တာ Asphalt Racing, N.O.V.A, Hero Of Sparta လို​ဂိမ်း​တွေ​နဲ့ iPhone, iPad မှာ နာမည်ကြီး​တဲ့ ဂိမ်း publisher ပါ။ Gameloft က​နေ​ပြီး​တော့ လက်​ရှိ သိပ္ပံ ပညာ​ရှင်​တွေ​နဲ့ ပေါင်း​ပြီး လေ့​လာ​ထား​စမ်းသပ်​ထား​တဲ့ video တစ်​ခု​ကို youtube မှာ ကြည့်​ရ​ပါ​တယ်။ Pet Pal လို့ခေါ်​တဲ့ iPhone app ဖြစ်​ပြီး အဲ​ဒီ app နဲ့ မိမိ အိမ်​မှာ​မွေး​ထား​တဲ့ တိ​ရိ​စာ​္​ဆန်​တွေ​ကို ခိုင်း​စေ​လို့​ရ​နိင်​အောင် လုပ်​ထား​ပေး​တာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
App, iPhone	Continue Reading
iPhone Tips & Tricks EBook For Myanmar
On April 1, 2011	by Htoo Tay Zar	With	6 Comments	- Apple	ပြီးခဲ့တဲ့ လ​တွေ​မှာ ပြည်​တွင်း​က it နည်း​ပညာ ဂျာနယ်​နဲ့ အခြား မဂ္ဂဇင်း​တွေ​မှာ iPhone, iPad နဲ့ iOS အကြောင်း​တွေ အများ​ကြီး ရေး​ဖြစ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ သ​တင်း​တွေ​လဲ​ပါ​သ​လို jailbreak လုပ်​နည်း မြန်မာ​ဖောင့် သွင်း​နည်း နဲ့ အခြား tips & tricks တွေ ရေး​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အခု​ကတော့ အဲ​ဒီ စာ​မူ​တွေ​ကော နောက် အသစ်​ရေးထား​တဲ့ ဆောင်းပါး​တွေ​ကော ပေါင်း​ပြီး pdf ဖိုင်​လုပ်​ထား​တာ​လေး တင်​လိုက်​တာ​ပါ။
eBook, iPhone	Continue Reading
Weird News ~ You Can Buy Apple TV in Yangon!!
On December 23, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Apple	ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က local IT Journal တစ္ေစာင္မွာ ဖတ္လိုက္ရတယ္ ၿပည္တြင္းက မိုဘိုင္းဖုန္း အိုင္ဖုန္းေတြသြင္းၿပီး ေရာင္းေနတဲ့ ဆိုင္တစ္ခုမွာ Apple TV ၀ယ္လို႔ရၿပီဆိုပဲ။ အလိုထူးဆန္းလွခ်ည္လားေပါ့ Apple TV ဆိုတာ Internet ကေန Stream လုပ္ယူတဲ့ device ဒီက web page မတက္တဲ့ ကြန္နက္ရွင္နဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား သံုးမလဲေပါ့ ေနာက္ iTunes Rental ဆိုတာကလဲ ၿမန္မာမေၿပာနဲ႔ စလံုးမွာေတာင္ သံုးလို႔မွ မရေသးပဲ။ Apple TV ကို ဘယ္အိုင္ဒီယာေတြနဲ႔ သြင္းလာပါလိမ့္.. iPhone ေတြ အ၀ယ္လိုက္တာနဲ႔ Apple ထုတ္ဆိုရင္ ၀ယ္ၾကမယ္ထင္ေနလို႔မ်ားလား…
Apple, Myanmar news	Continue Reading
Add Me in Your Game Center
On December 11, 2010	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- App, iPad, iPhone	ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး အားေနလို႔ ဘာတင္ရမလဲ စဥ္းစားရင္း iOS Game Center ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို add ဖို႔တင္လိုက္တာပါ။ ဒီ iPhone, iPad ေတြရဲ႕ Game Center အားနည္းခ်က္က FaceBook, Twitter, Google က သူငယ္ခ်င္းေတြကို ရွာလို႔မရတာပဲ။ Social sites အမ်ားစု အဲဒီလို ၀င္ရွာခြင့္ေပးေပမယ့္ ဒီတစ္ခုကေတာ္ေတာ္ဆိုးပါတယ္။
App, Games, iPad	Continue Reading
MMKeyboard ~ Myanmar Sar Keyboard for iPhone, iPad
On November 16, 2010	by Htoo Tay Zar	With	14 Comments	- App, iPad, iPhone	မေန႕ က MoeSeth ဆီကေန invitation message ပိုု႕လာတာကိုု စရပါတယ္။ သူ develop လုုပ္ထားတဲ့ App တစ္ခုု စျပီး launch လုုပ္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႕ promo code တစ္ခုု ပိုု႕ေပးလိုုက္တာပါ။ App နာမည္က MMKeyboard လိုု႕ေခၚၿပီး Universal App ျဖစ္တာမိုု႕ iPhone, iPod touch သာမကပဲ iPad မွာ ပါအလုုပ္လုုပ္ပါတယ္။ အရင္က ကုုိေစတန္ develop လုုပ္ထားတဲ့ Myanmar ZawGyi Keyboard ရွိေပမယ့္ jailbreak လုုပ္မွရတာရယ္ iPad မွာ မရတာေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိခဲ့ ပါတယ္။ အခုုကေတာ့ တရားဝင္ App Store world wide ကေရာင္းတာျဖစ္လိုု႕ jailbreak လုုပ္စရာမလိုု သလိုု iPad မွာပါ ရပါျပီ။
App, iPad, iPhone	Continue Reading